Yintoni enokwenzeka kwisabelo sabazisebenzelayo? | Ezezimali
Yintoni enokwenzeka kwinani labantu abazisebenzelayo?
UJoseph kwakhona | | Uqoqosho ngokubanzi
Enye yezinto ezingaqinisekanga ukuba abasebenzi abaziqeshileyo okanye abo bazisebenzelayo yinto eza kwenzeka kwiintlawulo zabo zenyanga. Kuba le nkqubo ibisoloko isebenza iminyaka emininzi izakuguqulwa. Apho yonke into ibonakala ibonisa ukuba baya kucaphula ngokusekwe kumvuzo wabo wokwenyani hayi ngendlela emiselweyo ukuza kuthi ga ngoku. Into ebenzakalisa kakhulu abo bafumana imali encinci ngomsebenzi wabo wobungcali. Ngokufaka iakhawunti encinci phantse kwi-euro ezingama-300 rhoqo ngenyanga.
Ngayiphi na imeko, kubonakala ngathi olu tshintsho ngumcimbi wexesha kwaye kuphela kukuqina kolu tshintsho kuhlala kusaziwa. Ukugqibela ukwazi ukuba ziya kuyichaphazela njani imali eseleyo yeakhawunti yakho yokonga ukusukela ngoko. Kungenxa yokuba, kunokubakho ukwahluka kwee-euro ezininzi minyaka le, ngakumbi kwabo bazisebenzelayo okanye abaziqeshileyo abanemivuzo ephantsi. Ingakumbi ezo zingaphantsi kwe- Ubuncinci boMvuzo woMsebenzi (SMI) kwaye loluphi olona tshintsho lukhulu ukuba luqaphele ngalo mzuzu kanye.
Ukulindela la manyathelo kwabo baziqeshileyo, akukho nto ilunge ngakumbi kunokujonga ukuba sithini isikhundla samaqela ezopolitiko aphambili kulo mbandela ofanelekileyo kwinxalenye enkulu yabasebenzi eSpain. Kuba iya kuxhomekeka kwinto ekufuneka beyihlawule kwiiakhawunti zikarhulumente ngexesha lokuvunywa, elinokuthi lisebenze kunyaka olandelayo. Ngokusekwe kwizikhokelo zikarhulumente omtsha waseSpain. Njengokuba kuza kwenzeka ntoni ngereyithi ethe tyaba yee-freelancers ngoku Ichazwe kwi-60 euro ngenyanga emva kokunyuka kwama-euro angama-10 ngoJanuwari odlulileyo. Zininzi indibaniselwano zento enokwenzeka ngale ndleko ukusukela ngoku.
1 Ukuzimela: ucinga ntoni amaqela?
2 Olunye ukhetho lweqela
3 Iiquotas zandisiwe ngomnye unyaka owongezelelweyo
4 Uhlengahlengiso kwiintlawulo zabantu abazisebenzelayo
Ukuzimela: ucinga ntoni amaqela?
Malunga neli candelo lentlalontle, I-PSOE inyathela la manyathelo alandelayo esiyibhengeza ngokulandelayo:
Ukulungiswa kweRegime ekhethekileyo yaBasebenzi abaziQeshileyo ukuze babe negalelo ngokwengeniso yabo yokwenyani.
Ukulwa noqoqosho lwangaphantsi komhlaba kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamanani abanye benkampani nabasebenzi, kunye nokunciphisa izithintelo kulawulo nakwimali.
Ukomeleza isiCwangciso seNgqesho esifanelekileyo, ukuze ufumane into ekuthiwa yeyokuziqhathela ubuxoki.
Yongeza ukhuseleko kwezentlalo ukulinganisa izibonelelo zentlalo zabantu abaziqeshileyo kunye nezo zifunyanwa ngabasebenzi abahlawulwayo. Inkqubela phambili kubukho jikelele kumalungelo.
Ngelixa kwelinye icala, i Iqela elidumileyo uyaxhasa la manyathelo alandelayo kweli qela loluntu:
Izinga lokuzisebenza ngokuzimeleyo kwiminyaka emi-3 yokuqala, kwaye uyolulela kubantu abangaphezulu kweminyaka engama-52 ubudala, abangasebenzi ixesha elide, abangaphantsi kweminyaka engama-30, kunye nabantu abasemngciphekweni njengamaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesini.
Ukuhla kwezinga labasebenzi abaziqeshileyo abangafikeleli kwi-SMI.
Ukuguquguquka kolawulo lokurhoxisa kwigalelo labasebenzi abaziqeshileyo.
Inkqubo apho abantu abaziqeshileyo benokuguquguquka okukhulu kunye nokukwazi ukukhetha igalelo labo.
Olunye ukhetho lweqela
Ukusuka Singagxila kula manyathelo angentla, nangona inamandla amakhulu ekusetyenzisweni kwayo xa ikhusela ezi zinto zilandelayo.
Quote kuphela kwiimbuyekezo ozifumeneyo hayi ngokokungalingani okwangoku.
Xela inkonzo kawonke-wonke yeeteksi enomdla ngokubanzi kwaye imisela imfuneko yeeyure ezi-2 zokufumana ikhontrakthi kwangaphambili kwi-VTC.
Ukulwa ubuqhetseba obuqeshwe buxoki: yandisa uhlolo kwaye kuya kucingelwa ukuba kukho ubudlelwane obuqeshiweyo xa umntu ozisebenzelayo enomthombo omnye wengeniso.
Ngelixa i-Ciudadanos lulwakhiwo oluseke olwahlukileyo ngokubhekisele kwimilinganiselo yabakhuphisana nayo. Ngezinye izindululo ezinokuthi zihlelwe njengobungcali obuninzi.
Ukongezwa ukuya kwiminyaka emi-2 yenqanaba leflethi lokuziqesha elitsha, kwaye abantu abazimeleyo nabo baya kuba nakho ukufikelela kwinqanaba le-pana.
Abantu abaziqeshileyo abanengeniso yokwenene engaphantsi komvuzo omncinci wonyaka abayi kuhlawula isabelo.
Musa ukuhlawula imali iminyaka emibini ukuba bangabazali.
Ukuba abantu abaziqeshileyo okanye ii-SME baqhubele phambili i-VAT yee-invoyisi abangaziqokelelanga, nokuba sekupheleni konyaka
Ukuba abantu abazisebenzelayo babale ubomi babo bonke bepenshini ukuba bayathanda.
Iiquotas zandisiwe ngomnye unyaka owongezelelweyo
Olunye uluntu oluzimeleyo lukhethe ukwandisa ireyithi ethe tyaba yabantu abaziqeshileyo. Le yimeko ethile yefayile ye- Uluntu lwaseMadrid enika eli thuba kubasebenzi abaziqeshileyo. Ngereyithi engama-50 euros ngenyanga kangangeminyaka emibini ilandelelana kwaye lowo ngumahluko ophambili ngokubhekisele kwezinye iindawo zejografi yesizwe. Nangona sisiphakamiso esiphakathi kwamanyathelo anikezelwe yinxalenye enkulu yamaqela ezopolitiko. Kwezinye iimeko kwanesindululo sokwandisa eli xesha ukuya kwiminyaka emithathu kwaye silindele ukuba siphumelele ngokomyalelo wobuphathiswa obethelela eli nqanaba phakathi kwabantu abazisebenzelayo.
Nangona kufuneka kugxininiswe ukuba isongezelelo kuya kufuneka sihlawulwe ngenxa yokupheliswa komsebenzi. Ngamanye amagama, ukuqokelela ubuqu babasebenzi abazisebenzelayo. Kwaye leyo yinyathelo lokuzikhethela kubahlawuli berhafu ngokusekelwe kwizinto ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwiminqweno yabo yobungcali kunye noluntu. Ngale ndlela, kuya kufuneka bahlawule ngaphezulu kwe-euro ezingama-10 ngenyanga ukuze babe noku ukugubungela ukuba bayeke nini ukwenza imisebenzi yabo ingcali ngenxa yaso nasiphi na isizathu. Apho elona xesha liphezulu lokuqokelela intswela-ngqesho lixesha leminyaka emibini ubuncinci iminyaka emine enegalelo phantsi kwale nkqubo yegalelo.
Uhlengahlengiso kwiintlawulo zabantu abazisebenzelayo
Kwimeko nayiphi na into, yonke into iya kuba yindleko yento urhulumente ozayo angayimisa ngayo kule minyaka elandelayo. Iya kuxhomekeka phi ukuba ukhona umahluko kwi Imirhumo yoKhuseleko lweNtlalo kwaye kwezinye kunokuba luncedo olukhulu kwiiakhawunti zabo zobungcali okanye zokonga. Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ngeli xesha ukuba iintlawulo zabasebenzi abaziqeshileyo zenziwa ngokusemthethweni phantsi kwenkqubo ehlawula abo banomvuzo ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Yintoni enokwenzeka kwinani labantu abazisebenzelayo?